इपीजी बैठक आजदेखि दिल्लीमा, प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउला ? - Everest Dainik - News from Nepal
इपीजी बैठक आजदेखि दिल्लीमा, प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउला ?
काठमाडौं, चैत्र २९ । नेपाल भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को बैठक आजदेखि नयाँ दिल्लीमा सुरु हुँदैछ। १९५० लगायतका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन गठित समूहले दिल्ली बैठकमा यसअघि तयार भएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने अपेक्षा गरिएको छ।
याे पनि पढ्नुस १९५० को सन्धिबारे इपिजी चौथो बैठकमा छलफल हुने